Mashruucyada | Golaha Midnimada Soomaaliyeed ee Finland
Golaha Midnimada Soomaaliyeed ee Finland
Wala jir baan wax ku qabsan karnaa
Golaha midnimada soomaaliyeed wuxuu hayaa mashruucyo kala duwan oo kala ah.
Mashruuca Anti marginalization
Anti-marginalization- Mashruuca ah waxaa laga fuliyay casimada wadanka iyo magaalooyinka kala ah Oulu iyo Vaasa. Waxaa mashruuca la fuliyay 2014 illaa 2015.
Mashruuca hadafyadiisa waxaa ka mid ahaa dhiiri kalinta dadka soomaaliyeed iyadoo ay jirto caqabado hor taagan, sida cunsurinimada oo kale. Mashruucu wuxuu magaaloyin kala duwan ka hirgaliyay qabtay cilmi baadis lagu ogaanayay dhibaatooyinka ay soomaalidu kala kulanto dadka finishka ah iyo nidaamka wadanka Finland sida xafiisyada dowliga ah, iskoolada iwm. reporkii kassoo baxay waxaa laga sameeyay buug la gaadhiisay hay’ado iyo ururo dowli ah. sidoo kale saxaafada ayaa la gaadhsiiyay.
Shaqooyinka uu qabtay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarta iyo dumarka loo qabtay seminaaro, wacyigalinno, iyo progaraammo ay ayagu wakhti isla qaataan. Mowduucyada ugu waaweeynna waxay ahaayeen: Waxbarashada, shaqaaleeysinta iyo tartamo lagu boorinaayo dhalinyarta. Waxaa kaloo laqabtay barnaamij ah is barta dariskaaga. Waaxana loogu tala galay in dadka finnishka iyo soomaalidu is bartaan si ay u yaraato waxa khaladka ah ee la iska aaminsanyahay.
Shaqooyinka uu mashruucu qabtay waxaa kamid ah in laga caawiyay ururada xubnaha ka ah golaha midnimada soomaaliyeed sidey wada shaqayn ula heli lahaayeen hay’ada dowliga ah ee kolba gobolkooda ka howl gala.
Mashruucan waxaa maal galiyay hay’adda Open Society Foundation.
Mashruuca SOKE 2012-2014
Mashruuca soke ujeedadiisu waxay ahayd in baadhitaan lagu sameeyo lagu waxyaabaha u baahan yahay goluhu sidii loo xoojin lahaa urur ahaan iyo dallad ahaanba. Waxaa kaloo la baadhay meelaha u baahneyd in laga xoojiyo urara xubnaha ka ah golaha midnimada soomaaliyeed.
Natiijooyinkii kassoo baxay baadhitaankaasi ayaa suurta galisay in uu goluhu awood ahaan, waxqadab ahaan, shaqaale ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u kobco.
Mashruuca waxaa kaloo kassoo baxay in la hormayiyay tayaddii iyo wada shaqentii ururada xubnaha ah. Mashruuca waxaa ka gacan geystay Suomen setlementtiliitto.
Mashruucan waxaa maal galiyay (STEA).
Mashruuca SOKE markuu dhammaaday waxaa badalay AK-hanke oo udub dhexaad u ah shaqada golaha midnimada soomaaliyeed.
Mashruusa sora hadafkiisu waa in laga hortago dambiilenimada iyo xagjirnimada dhalinyarada soomaaliyeed, iyadoo la isticmaalo qaabab kala duwan. Sida wacyikalin, waxbasho iyo shaqo la raadin. wakhtiyada ay dhalinyaradu firaaqada leeyihiin loo sameeyo waxbaha ay xiiseeyaan, sida ciyaaraha oo kale.
Mashruuca oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaa qayba af-finishka.
Dhacdooyinka mashruuca halkan ka akhriso tapahtumakalenterista.
Mashruucan waxaa maal galisay (STEA).
Mashruuca Valmiina töihin! 2017
Mashruucan oo ay maalgalisay wasaarada shaqada iyo shaqaalaha hadafkiisu wuxuu ahaa in dadka soomaaliyeed uu ay luqada iyo la qabsashada wadankan ku adagtahay in laga caawiyo sidii ay u hor marin lahayeen aqoontooda ku aadan shaqo raadinta iyo nidaamka shaqo helida loo maro.
Mashruucu wuxuu ka hirgalay gobollo badan.
Mashruuca Paikka Auki 2014-2017
Mashruucan oo ay bixisay STEA, looguna talagay in uu ku shaqaaloobo qof dhallinyaro ah oo ay da’diisuna ka yar tahay 30 sano, shaqo heliduna ku adagtahay. Hadafku waa in uu qofkaasi helo khibrad iyo aqoon uu mustaqablka ku shaqo heli karo.
Mashruucan shaqaalihiisu wuxuu ka shaqeeyaa arimaha dhalinyarada iyo caawinta macaamiisha xafiiska yimaada.
Copyright © Golaha midnimada Soomaaliyeed 2022.